Akaiky ny fanjakan'Andriamanitra - Worldwide Church of God Switzerland
lahatsoratra > Ny hoavy > efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra
"Mibebaha, fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra!" I Jaona Mpanao Batisa sy i Jesoa dia nanambara ny fahatokiana ny fanjakan’Andriamanitra (Mat 3,2; 4,17; marika 1,15). Efa akaiky ny fitondran’Andriamanitra nandrasana hatry ny ela. Io hafatra io dia nantsoina hoe ny filazantsara, ny vaovao tsara. An’arivony no nazoto nihaino sy namaly an’io hafatra avy amin’i Jaona sy Jesosy io.
Betsaka ny Jiosy niaina tamin'ny taonjato voalohany no nahalala ny teny hoe "Fanjakan'Andriamanitra". Tian'izy ireo fatratra Andriamanitra handefa azy ireo mpitarika izay handà ny fitondrana Romana ary hanao an'i Jodia ho firenena miankina - dia firenena manana fahamarinana, voninahitra ary fitahiana, firenena izay hotarihin'ny olona rehetra.
Tao anatin’izany rivo-piainana izany — ny fiandrasana mafy nefa manjavozavo momba ny fitsabahan’Andriamanitra notendren’Andriamanitra — dia nitory ny fahakaikezan’ny fanjakan’Andriamanitra i Jesosy sy i Jaona. “Efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra” hoy i Jesosy tamin’ny mpianany rehefa avy nanasitrana ny marary izy ireo (Matio 10,7; Lioka 19,9.11).
Tsy mitovy amin’ny nantenain’ny besinimaro ny fanjakan’i Jesosy, satria fantatsika fa Jiosy maro no tia nahita azy maty. Avy amin’izao tontolo izao ny fanjakany (Jaona 18,36). Rehefa niresaka momba ny “Fanjakan’Andriamanitra” izy, dia nampiasa teny azon’ny olona tsara, nefa nanome heviny vaovao. Nilaza tamin’i Nikodemosy izy fa tsy hitan’ny ankamaroan’ny olona ny fanjakan’Andriamanitra (Jao 3,3) - mba hahazoana na hiainana izany dia tsy maintsy havaozin’ny Fanahy Masin’Andriamanitra ny olona iray (and. 6). Ny fanjakan’Andriamanitra dia fanjakana ara-panahy fa tsy fandaminana ara-batana.
Tao amin’ny faminanian’ny Tendrombohitra Oliva i Jesosy dia nanambara fa ny fanjakan’Andriamanitra dia ho tonga aorian’ny famantarana sy fisehoan-javatra ara-paminaniana sasany. Misy amin’ireo fampianaran’i Jesosy sy fanoharana sasany anefa milaza fa tsy ho tonga amin’ny fomba manaitra ny fanjakan’Andriamanitra. Maniry mangina ny voa (Mar 4,26-29); ny fanjakana dia manomboka kely toy ny voan-tsinapy (and. 30-32) ary nafenina toy ny masirasira (Matio 1.3,33). Ireo fanoharana ireo dia milaza fa ny fanjakan’Andriamanitra dia tena misy alohan’ny hahatongavany amin’ny fomba mahery vaika sy manaitra. Ankoatra ny maha zava-misy amin’ny ho avy dia efa zava-misy.
Andeha hojerentsika ny andininy sasany mampiseho fa efa miasa ny fanjakan’Andriamanitra. Ao amin'ny Markus 1,15 Hoy i Jesosy: “Efa tonga ny fotoana ... efa tonga ny fanjakan’Andriamanitra”. Ireo matoanteny roa ireo dia amin'ny fotoana lasa, izay manondro fa nisy zavatra nitranga ary mitohy ny vokany. Tonga ny fotoana, tsy ho an'ny fanambarana ihany, fa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy koa.
Hoy i Jesosy, rehefa avy namoaka demonia: “Raha ny Fanahin’Andriamanitra no amoahako ny fanahy ratsy, dia efa tonga aminareo ny fanjakan’Andriamanitra.” ( Matio 1 Kor.2,2; Lioka 11,20). Efa eto ny fanjakana, hoy izy, ary ny fandroahana fanahy ratsy no porofo. Izany porofo izany dia mitohy ao amin’ny Fiangonana ankehitriny satria ny Fiangonana dia manao asa lehibe kokoa noho ny nataon’i Jesoa4,12). Afaka miteny koa isika hoe: “Raha ny Fanahin’Andriamanitra no amoahantsika fanahy ratsy, dia miasa eto sy ankehitriny ny fanjakan’Andriamanitra”. Amin’ny alalan’ny Fanahin’Andriamanitra, ny fanjakan’Andriamanitra dia manohy mampiseho ny heriny mibaiko ny fanjakan’i Satana.
Mbola mampiasa fitaomana i Satana, nefa resy sy voaheloka izy (Jaona 16,11). Voafetra amin'ny ampahany izany (Markus 3,27). Nandresy ny tontolon’i Satana i Jesosy (Jaona 16,33ary noho ny fanampian'Andriamanitra dia afaka mandresy azy ireo koa isika (1. Johannes 5,4). Saingy tsy ny rehetra no maharesy izany. Amin'izao vanim-potoana izao, ny fanjakan'Andriamanitra dia ahitana ny tsara sy ny ratsy3,24-30. 36-43. 47-50; 24,45-51; 25,1-12. 14-30). Mbola manan-kery i Satana. Mbola miandry ny hoavy be voninahitra ny fanjakan’Andriamanitra isika.
Ny Fanjakan'Andriamanitra dia mazoto amin'ny fampianarana
“Ny fanjakan’ny lanitra dia rombahina mandraka androany, ary ny mpandrombaka maka azy.” (Mat 11,12). Ireo matoanteny ireo dia amin'ny fotoana ankehitriny - ny fanjakan'Andriamanitra dia efa nisy tamin'ny andron'i Jesosy. Andian-teny mifanitsy, Lioka 16,16, dia mampiasa matoanteny amin'izao fotoana izao koa: "... ary samy manery ny olona hiditra ao". Tsy mila mitady hoe iza ireo olona mahery setra ireo ary nahoana izy ireo no mampiasa herisetra
- zava-dehibe eto fa ireo andininy ireo dia miresaka momba ny Fanjakan'Andriamanitra ho zava-misy ankehitriny.
Lioka 16,16 dia manolo ny tapany voalohany amin’ilay andininy hoe “Toriana ny filazantsaran’ny fanjakan’Andriamanitra”. Io fiovaovana io dia milaza fa ny fandrosoan'ny fanjakana amin'izao vanim-potoana izao dia mitovy amin'ny fanambarana azy, raha ny teny azo ampiharina. Ny fanjakan'Andriamanitra dia - efa misy - ary mandroso amin'ny alalan'ny fanambarana.
Ao amin'ny Markus 10,15, Jesosy dia nanipika fa ny fanjakan’Andriamanitra dia zavatra tsy maintsy horaisintsika, mazava ho azy eto amin’ity fiainana ity. Amin’ny fomba ahoana no misy ny fanjakan’Andriamanitra? Tsy mbola mazava ny tsipiriany, fa ny andininy nojerentsika dia milaza fa misy izy io.
Nisy Fariseo nanontany an’i Jesosy hoe rahoviana no ho tonga ny fanjakan’Andriamanitra7,20). Tsy hitanao izany, hoy i Jesosy namaly. Hoy koa anefa i Jesosy: “Ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo [a. Ü. eo aminareo] » (Lioka 17,21). I Jesoa no mpanjaka, ary noho izy nampianatra sy nanao fahagagana teo anivon’izy ireo, dia teo anivon’ny Fariseo ny fanjakana. Ao amintsika Jesosy ankehitriny, ary tahaka ny naha-teo ny fanjakan’Andriamanitra teo amin’ny asa fanompoan’i Jesosy, dia toy izany koa ny fisian’izany eo amin’ny fanompoana ny fiangonany. Eo anivontsika ny mpanjaka; ao amintsika ny heriny ara-panahy, na dia tsy mbola miasa amin’ny heriny rehetra aza ny fanjakan’Andriamanitra.
Efa nafindra ho amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika (Kolosiana 1,13). Efa mandray fanjakana isika, ary ny valin-tenintsika marina dia ny fanajana sy ny tahotra2,28). Kristy dia “nanao antsika ho fanjakan’ny mpisorona” (Apokalypsy 1,6). Vahoaka masina isika ankehitriny sy ankehitriny, nefa tsy mbola nambara izay ho toetsika. Nanafaka antsika tamin’ny fitondran’ny ota Andriamanitra ary nametraka antsika tao amin’ny fanjakany, eo ambany fahefany manjaka. Eto ny fanjakan’Andriamanitra, hoy i Jesosy. Tsy nila niandry Mesia mpandresy ny mpihaino azy - efa manapaka Andriamanitra ary tokony hiaina ny fombany isika izao. Mbola tsy manana faritany isika, fa eo ambanin’ny fitondran’Andriamanitra.
Ny fahatakarana fa efa misy ny fanjakan’Andriamanitra dia manampy antsika hifantoka bebe kokoa amin’ny fanompoana ny olona manodidina antsika. Tsy adinontsika anefa fa mbola ho avy ny fahavitan’ny fanjakan’Andriamanitra. Raha amin'izao vanim-potoana izao ihany ny fanantenantsika, dia tsy manana fanantenana firy isika (1. Korintiana 15,19). Tsy manana illusion isika hoe hitondra ny fanjakan’Andriamanitra ny ezaka ataon’ny olombelona. Rehefa miaritra fihemorana sy fanenjehana isika, rehefa mahita ny ankamaroan’ny olona mandà ny filazantsara, dia tonga ny hery avy amin’ny fahafantarana fa ao anatin’ny vanim-potoana ho avy ny fahafenoan’ny fanjakana.
Andininy maro no milaza amintsika fa ny fanjakan’Andriamanitra dia ho zava-misy ho avy be voninahitra. Fantatsika fa Mpanjaka i Kristy, ary manantena ny andro hampiasany ny heriny amin’ny fomba lehibe sy manaitra mba hanafoanana ny fijalian’ny olombelona. Ny bokin’i Daniela dia manambara mialoha ny fanjakan’Andriamanitra izay hanapaka ny tany rehetra (Daniela 2,44; 7,13-14. 22). Ny bokin’ny Apokalypsy ao amin’ny Testamenta Vaovao dia mamaritra ny fiaviany (Apokalypsy 11,15; 19,11- iray).
Mivavaka isika mba ho tonga ny fanjakana (Lio 11,2). Miandry ny “valisoa any an-danitra” ho avy ireo mahantra am-panahy sy enjehina (Mat 5,3.10.12). Tonga ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra ny olona amin’ny “andro” fitsarana ho avy (Mat 7,21-23; Lioka 13,22-30). Nanao fanoharana i Jesosy satria nino ny sasany fa efa ho tonga amin’ny hery ny fanjakan’Andriamanitra9,11). Tao amin’ny faminanian’ny Tendrombohitra Oliva i Jesoa dia nanoritsoritra fisehoan-javatra manaitra izay hitranga alohan’ny fiverenany amin’ny hery sy ny voninahitra. Talohan’ny nanomboana Azy tamin’ny hazo fijaliana, Jesosy dia niandrandra fanjakana ho avy6,29).
Imbetsaka i Paoly no miresaka momba ny “handova ny fanjakana” ho toy ny traikefa ho avy (1. Korintiana 6,9-10; 15,50; Galatianina 5,21; Efesianina 5,5) ary, etsy an-danin’izany, dia maneho amin’ny alalan’ny fiteniny fa mihevitra ny fanjakan’Andriamanitra ho zavatra izay tsy ho tanteraka amin’ny faran’izao tontolo izao izy (2. Thessalonians 2,12; 2. Thessalonians 1,5; Kolosiana 4,11; 2. Timoty 4,1.18). Raha mifantoka amin’ny fisehoan’ilay fanjakana amin’izao fotoana izao i Paoly, dia mirona na hampiditra ny teny hoe “fahamarinana” miaraka amin’ny “fanjakan’Andriamanitra” (Romana 1 Kor.4,17) na hampiasaina amin’ny toerany (Romana 1,17). Jereo ny Matio 6,33 Momba ny fifandraisana akaiky ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fahamarinan’Andriamanitra. Na i Paoly dia mirona (mifandimby) ny hampifandray ny fanjakana amin'i Kristy fa tsy Andriamanitra Ray (Kolosiana 1,13). (J. Ramsey Michaels, “The Kingdom of God and the Historical Jesus”, Toko faha-8, The Kingdom of God in 20th Century Interpretation, natontan’i Wendell Willis [Hendrickson, 1987], p. 112).
Soratra masina “Fanjakan’Andriamanitra” maro no azo ampiharina amin’ilay fanjakana ankehitriny sy amin’ny fahatanterahan’izany amin’ny hoavy. Ny mpandika lalàna dia hatao hoe kely indrindra any an-danitra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra (Mat 5,19-20). Mandao fianakaviana isika noho ny fanjakan’Andriamanitra8,29). Amin’ny fahoriana no idirantsika ny fanjakan’Andriamanitra (Asa 14,22). Ny zava-dehibe indrindra ato amin'ity lahatsoratra ity dia ny hoe misy andininy mazava amin'ny fotoana ankehitriny ary ny sasany voasoratra mazava amin'ny ho avy.
Taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty, dia nanontany azy ny mpianany hoe: “Tompo ô, amin’izao andro izao va no hanangananao fanjakana ho an’ny Isiraely indray?” (Asan’ny Apostoly 1,6). Ahoana no tokony hamalian’i Jesosy ny fanontaniana toy izany? Ny tian’ny mpianatra holazaina amin’ny hoe “fanjakana” dia tsy izay nampianarin’i Jesosy. Mbola nieritreritra momba ny fanjakana iray ihany ny mpianatra fa tsy olona nivoatra tsikelikely voaforon’ny foko rehetra. Naharitra taona maro izy ireo vao nahatakatra fa noraisina tsara tao amin’ilay fanjakana vaovao ny Jentilisa. Mbola tsy eto amin’izao tontolo izao ny fanjakan’i Kristy, fa tokony ho mavitrika amin’izao vanim-potoana izao. Ka tsy niteny eny na tsia i Jesoa fa nilaza fotsiny fa misy asa sy hery hanaovana izany asa izany (and 7-8).
Matio 25,34 milaza amintsika fa ny fanjakan’Andriamanitra dia efa niomana hatramin’ny nanorenana izao tontolo izao. Teo foana izy io, na dia tamin’ny endriny samihafa aza. Mpanjaka ho an’i Adama sy Eva Andriamanitra; nomeny fanapahana sy fahefana hanapaka izy ireo; izy ireo no governora lefiny tao amin’ny saha Edena. Na dia tsy ampiasaina aza ny teny hoe “fanjakana”, dia tao amin’ny fanjakan’Andriamanitra i Adama sy i Eva — teo ambany fanapahany sy ny fananany.
Rehefa nanao fampanantenana tamin’i Abrahama Andriamanitra fa ny taranany dia ho tonga firenena lehibe ary hisy mpanjaka avy aminy (1. Mosesy 17,5-6), dia nampanantena ny fanjakan’Andriamanitra izy ireo. Saingy nanomboka kely izany, toy ny masirasira ao anaty koba, ary naharitra an-jatony taona vao nahita ilay fampanantenana.
Rehefa nitondra ny Isiraelita nivoaka avy tany Egypta Andriamanitra ka nanao fanekena taminy, dia tonga fanjaka-mpisorona izy ireo (2. Mosesy 19,6), fanjakana izay an’Andriamanitra ary azo antsoina hoe fanjakan’Andriamanitra. Ny fifanekena nataony tamin’izy ireo dia nitovy tamin’ireo fifanekena nataon’ny mpanjaka mahery tamin’ny firenena kely kokoa. Efa namonjy azy ireo Izy, ary namaly ny Isiraelita - dia nanaiky ho olony izy ireo. Andriamanitra no Mpanjakany (1. Samoela 12,12; 8,7). Nipetraka teo amin’ny seza fiandrianan’Andriamanitra i Davida sy i Solomona ary nanjaka tamin’ny anarany9,23). Fanjakan’Andriamanitra ny Israely.
Tsy nankatò an’Andriamaniny anefa ny olona. Nandroaka azy ireo Andriamanitra, nefa nampanantena fa hamerina amin’ny laoniny ny firenena amin’ny fo vaovao1,31-33), faminaniana tanteraka ao amin’ny Fiangonana ankehitriny izay miombona amin’ny Fanekena Vaovao. Isika izay nomena ny Fanahy Masina dia fisoronana mpanjaka sy firenena masina, izay tsy azon’ny Isiraely fahiny (1. Petrus 2,9; 2. Mosesy 19,6). Ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika, nefa misy tsimparifary maniry eo anelanelan’ny voa. Amin'ny faran'izao tontolo izao dia hiverina amin-kery sy voninahitra ny Mesia, ary hovana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakana manaraka ny Arivotaona, izay lavorary sy ara-panahy ny olona rehetra, dia hiavaka tanteraka amin’ny Arivotaona.
Koa satria manana fitohizana ara-tantara ilay fanjakana, dia marina ny firesahana momba azy io amin'ny lafin'ny vanim-potoana lasa sy ankehitriny ary ho avy. Amin'ny fivoarany ara-tantara dia nananany ary mbola hanana dingana lehibe izy rehefa ambara ny dingana vaovao. Naorina teo amin’ny Tendrombohitra Sinay ny fanjakana; niorina tao amin’ny asan’i Jesosy sy tamin’ny alalan’ny asan’i Jesosy izany; haorina amin'ny fiverenany aorian'ny fitsarana. Amin’ny dingana tsirairay, ny vahoakan’Andriamanitra dia hifaly amin’izay ananany ary vao mainka hifaly amin’izay ho avy. Rehefa miaina lafin-javatra voafetra sasany ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika ankehitriny, dia mahazo fahatokiana fa ny fanjakan’Andriamanitra amin’ny hoavy dia ho tanteraka ihany koa. Ny Fanahy Masina no antoky ny fitahiana lehibe kokoa (2. Korintiana 5,5; Efesianina 1,14).
Rahoviana no handre ny teny hoe ny fanjakana na ny fanjakana isika dia hampahatsiahivina ireo fanjakana an'ity tontolo ity. Eto an-tany, ny fanjakana dia mifandray amin'ny fahefana sy ny fahefana fa tsy amin'ny firindrana sy ny fitiavana. Ny Fanjakana dia afaka mamaritra ny fahefana ananan'Andriamanitra ao amin'ny fianakaviany, saingy tsy mamaritra ireo fitahiana rehetra nomen'Andriamanitra antsika. Izany no antony ampiasàna ny sary hafa, toy ny anaram-pianakaviana, izay manamafy ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahefany.
Ny famonjena [famonjena] dia teny ankapobe. Nilaza i Paoly fa voavonjy isika (Efes 2,8), hovonjena isika (2. Korintiana 2,15) dia hovonjena isika (Romana 5,9). Famonjena no nomen’Andriamanitra antsika ary antenainy ny hamaly azy amin’ny finoana. Nanoratra momba ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay i Jaona ho zava-misy ankehitriny, fananana (1. Johannes 5,11-12) ary fitahiana ho avy.
Rehefa niresaka momba ny fanjakan’Andriamanitra i Jesosy, dia tsy nanantitrantitra ny fitahiana ara-batana izany na nanazava ny fanisan-taonany. Nifantoka tamin’izay tokony hataon’ny olona mba handraisana anjara amin’izany kosa izy. Ny mpamory hetra sy ny vehivavy janga dia miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra, hoy Jesosy (Matio 21,31), ary manao izany izy ireo amin’ny finoana ny filazantsara (and. 32) sy amin’ny fanaovana ny sitrapon’ny Ray (and. 28-31). Miditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika rehefa mamaly an’Andriamanitra amim-pinoana sy amim-pahatokiana.
Ao amin’ny Marka 10, dia te handova ny fiainana mandrakizay ny olona iray, ary nilaza i Jesoa fa tokony hitandrina ny didy izy (Marka. 10,17-19). Nanampy didy hafa koa i Jesoa: Izy nandidy Azy hahafoy ny fananany rehetra ho amin’ny rakitra any an-danitra (and. 21). Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Manao ahoana ny hasarotry ny hidiran’ny mpanankarena amin’ny fanjakan’Andriamanitra! (V. 23). Dia hoy ny mpianatra: Iza ary no hovonjena? (V. 26). Ao amin'ity fizarana ity sy ao amin'ny andalan-teny mifanitsy amin'ny Lioka 18,18-30, misy teny maromaro ampiasaina izay milaza zavatra mitovy: Raiso ny fanjakana, mandova ny fiainana mandrakizay, manangona harena any an-danitra, midira amin’ny fanjakan’Andriamanitra, dia hovonjena. Rehefa nilaza i Jesosy hoe: “Manaraha Ahy” (and. 22), dia nampiasa fomba fiteny hafa koa izy mba hilazana ny zavatra mitovy amin’izany: Miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra isika amin’ny fitarihana ny fiainantsika amin’i Jesosy.
Ao amin’ny Lioka 12,31-34 Nasongadin’i Jesosy fa misy teny maro mitovitovy amin’izany: katsaho ny fanjakan’Andriamanitra, raiso ny fanjakana, manana harena any an-danitra, miala amin’ny fitokiana amin’ny fananana ara-nofo. Mikatsaka ny fanjakan’Andriamanitra isika amin’ny famaliana ny fampianaran’i Jesosy. Ao amin’ny Lioka 21,28 ary ny fanjakan'Andriamanitra dia ampitoviana amin'ny famonjena. Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 30:20,22–32, dia mianatra isika fa i Paoly dia nitory ny filazantsaran’ny fanjakana, ary nitory ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny finoany izy. Mifandray akaiky amin’ny famonjena ilay fanjakana - tsy mendrika ny hitoriana ilay fanjakana raha tsy afaka mandray anjara amin’izany isika, ary amin’ny alalan’ny finoana sy ny fibebahana ary ny fahasoavana ihany no ahafahantsika miditra, ka anisan’ny hafatra rehetra momba ny fanjakan’Andriamanitra ireo. . Ny famonjena dia zava-misy ankehitriny ary koa fampanantenana fitahiana ho avy.
Tao Korinto Paoly dia tsy nitory afa-tsy Kristy sy ny fanomboana azy (1. Korintiana 2,2). Ao amin’ny Asan’ny Apostoly 28,23.29.31 Lazain’i Lioka amintsika fa i Paoly dia nitory ny fanjakan’Andriamanitra sy ny amin’i Jesosy ary ny famonjena tany Roma. Ireo dia lafiny samy hafa amin’ny hafatra kristiana iray ihany.